Shina: Voasivana ny Flickr ary naneho hevitra ny vondrom-piarahamonina Flickr · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Janoary 2019 4:29 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Jona 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Voasakana tany Shina nanomboka ny 7 Jona 2007 ny Flickr, tranonkala fifampizarana sary malaza: ” Toa voasakana ho an'ireo mpisera ao amin'ny ankamaroan'i Shina ny fidirana amin'ny lohamilina fandefasana sary. Nijery izany lalina ny ekipanay ara-teknika ary nahita fa tsy olana ara-teknika avy aminay izany. Nanara-maso ny toe-draharaha izahay ary hanome vaovao raha misy ny fivoarana “, hoy ny Tale Jeneralin'ny Flickr, Stewart Butterfield, tao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra ho an'ny fanampiana .
Araka ny tatitra nataon'i John Kennedy tato amin'ny Global Voices teo aloha, ny anton'ny fandraràna ny Flickr dia mety noho ny sary-tatitra momba ny hetsi-panoherana tao Xiamen izay nalefa tao amin'ny flikr .
Nanolotra ny fanohanany ho an'ny vondrom-parahamonin'ny Flickr Shinoa ary nampiditra tovana “Ry Shinoa Ahoana No..” i Hamed Saber, ny mpandrafitra an-tseraseran'ny Access Flickr! ao amin'ny Firefox (jereo ny antsafa nifanaovany tamin'ny Global Voices) izay nandray anjara tamin'ny adihevitra mahaliana momba ny Rindrin'Afo Lehibe ao Shina.